अमेरिकामा पढेर देशकै नाम उज्जवल पार्न चाहान्थे, बा आमा पत्नि र आफन्त सबैलाई रुवाएरै युवा उमेरमा नै बिदा भए ! – AB Sansar
November 29, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on अमेरिकामा पढेर देशकै नाम उज्जवल पार्न चाहान्थे, बा आमा पत्नि र आफन्त सबैलाई रुवाएरै युवा उमेरमा नै बिदा भए !
काठमाडौँ । अमेरिकामा ३३ वर्षका एक डाक्टरको नि’ध’न भएको छ । अमेरिकाको न्यु योर्कस्थित रोचेष्टरको अस्पतालमा कार्यरत नेपाली डाक्टर रोशन झाको ३३ बर्षको उमेरमा हृ:द’यघा:तका कारण नि:ध’न भएको उनी कार्यरत अस्पतालका साथीहरुले गो फण्ड मिको अकाउन्टमा लेखेका छन्।
रेजिडेन्ट फिजिशियनका रुपमा कार्यरत डाक्टर रोशनकी श्रीमती डेन्टिस्ट बिषयको अध्ययन गर्दैछिन । नि:ध’न भएको दिनमा पनि बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर रोशनकी श्रीमती बिहानको खाना बनाएर उनलाई पर्खेर बसेकी थिइन्।
तर दु:र्भा’ग्य उनले त्यो खाना खान पाएनन। पारिवारिक स्रोतका अनुसार डाक्टर रोशनले डाक्टर पढ्नकै लागि करिब ३ लाख डलर लोन लिएको बताइन्छ । उनको उक्त लोन तिर्नमा सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले उनका आफन्त र साथीभाईले गो फण्ड मी अकाउण्ट शुरु गरेका छन् । जसमा अहिलेसम्म १ लाख ३९ हजार डलर सहयोग उठिसकेको छ ।